Ramos Oo Ka Warbixiyay In Real Madrid Ay Sii Wadi Doonto Dagaalkeeda Ku Aadan La Liga, Isagoo Dhinaca Kale Ka Hadlay Goolkii Uu Xalay Ka Dhaliyay Leganes. – GOOL24.NET
February 22, 2018 Cabdi Yare
Kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos ayaa wuxuu farxad ka muujiyay guushii ay Los Blancos xalay kaga gaadhay kooxda Leganes kulankii baaqiga u ahaa ee horyaalka La Liga ee dalka Spain ee ka tirsanaa kulamada 16-aad, Real ayaana soo gashay booska kaalinta saddexaad iyagoo haatan 14 dhibcood u jira hogaamiyaasha Barcelona.
Ramos ayaa kulanka kadib wareysi uu bixiyay waxaa soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuxuuna yidhi: “Dhamaantayada waxaan isku dayeynaa sida aan ku heli lahayn saddexda dhibcood, waxaa inoo harsanaa kulan ay muhiim ay ahayd inaan ku soo yareeno farqiga jira, sidoo kale waxaa muhiim ahayd inaan ka qeyb qaato goolashii kulankan, xili aan gaaray kulankeedii 550-aad ee xirfadeyda kubada cagta”.
Kabtanka Real Madrid oo ka hadlayay goolkii rikoodhada uu dhaliyay ayaa wuxuu yidhi: “Xili kasta uu joogo Cristiano Ronaldo isaga ayaa tuuraya, hadii uusan sidoo kale tuurin Gareth Bale aniga ayaa ah cida tuureysa rikoodhada taagan, ma jiraan wax loolan ah waana sii wadi doonaa”.
Sergio Ramos ayaa hadalkiisa intaas siiraaciyay: “Guulahaan waxay mar walba dib u xoojineysaa kalsoonida kooxda, inkastoo aan lasoo kulanay natiijooyin xun xun xiliyadii dhawaa ee lasoo dhaafay, laakiin waxaan heysanaa khad wanaagsan, waana inaan sii wadno”.
Ramos ayaa hadalkiisa kusoo xidhay: “Waxaan gaari doonnaa bar-tilmaameedyadeena waliba talaabo talaabo, waxaan sii wadi doonaa dagaalkeena ku aadan horyaalka La Liga, waxaana soo yareyn doonaa farqiga dhibcaha inta ay suurtagal tahay”.